कृषी तथा वातावरण Archives - खबरदारी न्युज
कृषी तथा वातावरण डडेलधुरा समाचार समाज
कृषकलाई प्रेरित गर्दे डडेल्धुराका प्रसाद अवस्थि
दिपक राज भट्ट (डडेल्धुरा)ः डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउपालिकाको गणेशपुरमा वि.सं. २०३६ सालमा जन्मिएका प्रशाद अवस्थिले आफु सानै १४ बर्षको हुदा नै कृषिमा प्रतक्ष्य संलग्न भएको कुराले उनलाई हरेक बेला स्मरण गराई रहन्छ ।
विद्यालय अध्ययन गर्दा आफुले तरकारि घुमाई बेचेर कापीकलम किन्ने गरेको अवस्थि बताउछन् । सानो बारिबाट सुरुवात गरेको त्यो कृषिले हाल लाखौंको लगानी गरिसकेको छ ।
प्रविधिकरण हुदै गर्दा अवस्थिले ०७४ सालमा व्यवसायिक कृषि व्यवसाय गर्ने योजना गरे र सोहि योजना अनुसार भागेश्वर कृषि तथा पशुपंक्षी र्फम दर्ता गरे । फर्म दर्ता गर्दा रु २५ लाख लगानी गरेका अवस्थिको फर्ममा हाल १ करोड १५ लाख लगानी रहेको छ । फर्मले हाल १५ जना लाई बाषिर्क रोजगारी दिएको छ ।
फर्मको उत्पादित उपजहरु कैलाली,कञ्चनपुर,डडेल्धुरा मात्र हैन कि संघिय राजधानी सम्म बिकिृ हुने गर्दछ । फर्मका लागि अवस्थिले ४०० रोपनी जमिन लिजमा लिएका छन् जसको भाडा मात्र बाषर््िा रु १० लाख रहेको छ । फर्ममा अहिले तरकारी,भैसि पालन,कुखुरा पालन र च्याउ खेती गरिएको छ । फर्मले बाषर््िाक लाखौं रकम बराबरको उत्पादित उपजहरु बिकिृवितरण गर्छ ।
यसरि आफुले यस क्षेत्रमा अगाडि बढनुका लागि प्रेरणाको स्रोत भने बुबा रहेको अवस्थि भन्छन् । फरक यति हो कि बुबाले परम्परागत तरिकाले गरिरहेका थिए मैले आधुनिक तरिकाले गरिरहेको छु । काम गर्दा समस्या र चुनौति आउनु स्वभाविक नै हो बस हामीले सामना गरेर अगाडि बढनु पर्छ सफलता अवश्य मिल्छ ।
उसो त र्फम दर्ता गरेपछि सरकारले पनि केहि हद सम्म सहयोग गरेको र पनि ठुलो मात्रामा भने अझै लगानी दिनु नसक्नु काम गर्ने किसानहरुका लागि दुखको कुरा नै हो ।
विदेश जाने युवाहरुका लागि प्रशाद अवस्थि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् । उनले युवाहरु लाई सुझावसललाह पनि दिनुका साथै प्राविधिक ज्ञान समेत दिने गरेका छन् ।
विदेश जाने युवाहरु लाई अवस्थि भन्न चाहान्छन स्वदेशमै सानो लगानी बाट व्यवसायिकता गर्न सकिन्छ ,समस्या र चुनौतिको सामना गरेर धैर्य गर्नुपर्छ ।
हरेक युवाले स्वदेशमै सानो सानो लगानी गरेर व्यवसायिक रुपले काम गर्ने हो भने बैदेशिक आयात कम हुने र स्वदेशी उत्पादनले नै परिपुर्ति गर्न सकिनेमा भने आम नागरिक विश्वस्त छन् । स्वदेशमै स्वरोजगारी सिर्जना हुने भएकाले पनि यसरि व्यवसायिकिकरण तिर सम्बन्धित निकायको लगानी लाग्नु जरुरि देखिन्छ ।
डेल्धुराका ३ कृषकलाई ‘भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’
डडेल्धुरा : डडेल्धुराका ३ जना कृषकलाई ‘भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीले उनिहरुलाई पुरस्कृत गरेको हो । पुरस्कृत हुनेमा गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नं.१ का दतराज अवस्थी, आलिताल गाउँपालिका वडा नं.७ का शोभा कुमारी वोहरा र नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं.२ का लक्ष्मी दत भट्ट रहेका छन् ।
कृषक अवस्थी पोलिहाउस भित्र तरकारी खेतीबाट,भट्ट तरकारी बिउ उत्पादनबाट र वोहरा पशुपालन व्यवसायबाट पुरस्कृत भएका हुन् । कृषि विकास निर्देशनालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच उनिहरु प्रत्येकलाई नगद रु.२५ हजार र सम्मान–पत्र सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै कार्यविधी बनाएर यो पुरस्कार प्रदान गर्ने तयारी गरेको र यस वर्षबाट शुरुवात गरेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका प्रमूख यज्ञराज जोशीले बताए ।
सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा ३/३ जनाका दरले कृषकहरुलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको उनले बताए । ती ९ जिल्लाका २७ जना कृषकमध्येबाट पनि १ जनालाई सर्वोत्कृष्ट र ४ जनालाई उत्कृष्ट गरी ५ जना कृषकलाई यहि पुस ५ गते डोटीमै आयोजना गरिने कार्यक्रमबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी लगाएतको उपस्थितीमा पुरस्कार प्रदान गरिने जोशीले जानकारी दिए ।
डडेल्धुरामा जन्मिएका किसान नेता एवं सहिद भीमदत्त पन्तको नामबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । पुरस्कारको राशि भन्दा पनि किसानलाई गरिएको सम्मान महत्वपूर्ण भएको र यसले अरुलाई पनि कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्न खोजिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमूख रामचन्द्र भट्टले बताए ।
कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा राम्रो गर्ने किसानहरुको हौसलाका लागि पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराका प्रमूख देव राज भट्टले बताए ।
‘भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’बाट आफु पुरस्कृत भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नं. १ का दतराज अवस्थीले वि.सं। २०५२ सालदेखि तरकारी खेतीमा लागेको अहिले आएर उपलब्धी हासिल गरे झैं महशुस भएको बताए । तरकारी खेती गर्न शुरुवात गर्दाको ५० वटा पोलिहाउस भित्र २० रोपनी जमीनमा तरकारी खेती गर्दै आएको बताए । जसबाट सिजनमा ४ देखि ५ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनले अनुभव साँटे । साथै आफुसँगै उनले गाउँका मानिसहरुलाई पनि तरकारी खेतीमा आकर्षित गरी सामुहिक तरकारी खेती गरिरहेको पनि सुनाए ।
त्यस्तै नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं.२ का लक्ष्मी दत भट्टले आफुले हालसम्म कुनै पनि प्राविधिक तालिम नलिएरै भए पनि तरकारी विउ उत्पादन, मसलाबालीको खेती र कुखुरापालन गर्दै आएको बताईन् । शुरुमा २ पोकाबाट शुरु गरेको विउ उत्पादन पछिल्लो समयमा ५ सय पोकासम्म उत्पादन गर्ने गरेको उनले सुनाईन् । आफुले गरेको व्यवसायलाई मुल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गरेकोमा उनले कृषि विकास निर्देशनालयलाई धन्यवाद दिए ।
त्यस्तै आलिताल गाउँपालिका वडा नं.७ का शोभा कुमारी वोहराले आफुले गरेको पशुपालनको स्थलगत अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आफुलाई पुरस्कृत गरेकोमा निकै खुशी व्यक्त गरिन् । साथै आफुले गर्दै आएको व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी भईरहेको उनले बताए ।
कञ्चनपुर कृषी तथा वातावरण
रासायनिक मलखाद नपाउँदा कञ्चनपुरका किसान चिन्तित
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार १०:२२
कञ्चनपुर,८ साउन । धानखेतका लागि रासायनिक मलखाद नपाउँदा कञ्चनपुरका किसान चिन्तित बनेका छन् । महेन्द्रनगरस्थित कृषि…
दीपक राज भट्ट(भागेश्वर) – डडेल्धुरा जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका २ लेकुडामा रामदत्त जाेशिले अहिले दाजुभाइ कृषि तथा…
२०७८, १५ असार मंगलवार ०९:५६
काठमाडौं,१५ असार – मङ्गलवार देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशको खाद्यान्नको…
कृषी तथा वातावरण समाचार
२०७८, ३ असार बिहीबार १२:४३
डोटी,३ असार । रोपाइँ सुरु भए पनि रासायनिक मल अभावमा किसानलाई समस्या हुँदै आएको छ।समयमै कहिले पनि…
२०७८, ३० जेष्ठ आईतवार १३:२६
जेठ सकिन लाग्दासमेत धानको बीउ नपाएपछि महोत्तरीका किसान यसपालि अन्नको सङ्कट बढ्ने आशङ्काले पिरोलिएका छन् ।…
२०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार ०५:५९
काठमाण्डौ । भारतमा मनसुन भित्रिएको छ । एक दिन अगावै भित्रिएको मनसुनी प्रणालीका कारण मुम्बईमा ठूलो…
२०७८, २४ जेष्ठ सोमबार १३:४५
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै यतिबेला आक्रान्त बनेको छ । यति वेला सबै क्षेत्र…